IZIQITHI ZASEKHITSHI EZIMANZI EZIMNANDI (IICOMPERTOP DESIGNS) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iziqithi zaseKhitshi eziManzi eziMnandi (iiCompertop Designs)
Iziqithi zaseKhitshi eziManzi eziMnandi (iiCompertop Designs)
Wamkelekile kwigalari yethu yeziqithi zasekhitshini ezintle ezinamanzi aqukethe izinto ezahlukeneyo kunye nezitayile zoyilo.
Bathi ikhitshi yintliziyo yekhaya. Kulapho usapho luhlangana khona kwaye luchitha ixesha elininzi ukudibana kunye. Kwaye ukuba yenye yezona ndawo zixakekileyo ekhaya, awucingi ukuba kufanelekile ukuphatha ikhitshi lakho kumnxeba owongeziweyo wobunewunewu kunye nobunkunkqele?
Iziqithi zasekhitshini ezingamanzi zingolunye lwezinto ezinokuphononongwa ukuba ufuna ukongeza into emakhayeni akho. Ukuba yenye yeendlela eziqhubela phambili kwimeko yoyilo lwangoku lwasekhitshini, isiqithi esinengxangxasi sinokusebenza ngokumangalisayo ngokwenza isitopu yangoku kunye ne-sleek ehlaziya ukubonakala kwekhitshi lakho.
Iikhitshi zeMpuma yeKhitshi yesiQithi saManzi
Yintoni isiqithi sekhitshi engxangxasi? Ikwabizwa ngokuba sisiqithi somsebenzi esisongelwe sisiqithi, ‘iiphaneli zokuphelisa ingxangxasi okanye iirisers, isiqithi esinengxangxasi luhlobo lwesiqithi sekhitshi apho umphezulu wekhawuntara uqukuqela usiya kwicala lomzimba wesiqithi. Ngokwesiqhelo indawo yokusebenza ethe tyaba yandiswa ngokuthe nkqo kwiiphaneli ezisecaleni zekhabinethi, ukuqhubeka ukuya phantsi. Indawo yokusebenza ehamba ngamanzi isikhumbuza amanzi ahamba amanzi avela kwimpompo. Esi siphumo senkcenkceshela esisiphumo sinika imvelaphi yegama laso. Ngeziqithi zasekhitshini elinengxangxasi, i-countertop, iikhabhathi kunye nomgangatho wokujonga konke kujongeka kunxibelelene. Yahlukile kwisiqithi esiqhelekileyo sasekhitshini esihlala sinendawo yokusebenzela ephela emaphethelweni.
Ukuthetha ngobuchwephesha, ikwabhekisa kuhlobo lokungabinamthungo oluqeshwe ukulwa izinto eziphezulu. Ukuba usebenzisa usingasiqithi okanye isihlomelo kwikhawuntara esele ikho yokusebenza esisigxina kwelinye icala, umphetho wesiqithi sempophoma uhlala usetyenziswa kwicala elinye. Oku kunika umdla owongeziweyo kuyilo lwekhitshi lakho. Kwiziqithi zekhitshi, umphetho wempompo unokumiliselwa kumacala omabini. Oku kukhokelela kuyilo olulinganayo ngakumbi apho indawo yokusebenza ikwayinto enye esetyenziselwa iiphaneli ezisecaleni kwesi siqithi, nezithi zibangele ukujonga okuthe kratya. Imiphetho yeengxangxasi ayigcini nje kwiipeninsula okanye kwiziqithi, njengoko inokusetyenziselwa ezinye izakhiwo zekhitshi ezinje nge-L, ezimise u-U, igali okanye ikhitshi elinye elibiyelweyo, apho ubuchule bokuyila bubonakaliswa kwisiphelo esivulekileyo somjikelezo ikhawuntari.
Xa kuziwa ekuyileni eyakho intaba yekhitshi yesiqithi, kukho iindlela ezininzi zokuyila ezinokuthi zihlolwe. Iintlobo ngeentlobo zezinto ezikhethwayo eziza kwimibala ebanzi zinika ithuba elingenamda lokudibanisa kunye nokugqibezela ukugqiba kunye nombala wephalethi ohambelana nokukhetha kwakho kuyilo kunye nesitayile. Ikuvumela ukuba ugcobe ubume, umbala kunye nokugqiba ngaphakathi ekhitshini lakho. Unokukhetha nokuba ufuna ukudibanisa ukwenza inkangeleko ehambelanayo, okanye umahluko ukuba ufuna ukuvumela isiqithi esingumanzi ukuba sime kwisithuba. Ngenxa yoko, oku kuyakuvumela ukuba unciphise iindleko njengoko unokukhetha ngononophelo ukuba zeziphi izinto ezifanelekileyo kuhlahlo-lwabiwo mali.
Ngokwesiqhelo, imiphezulu yeetafile esetyenziselwa ubume bekhitshi eyona nto inye ibandakanywa kwisiqithi sekhitshi enamanzi. Ngenye indlela, unokutshatisa indawo ekuphoswa kuyo ikhitshi kwisiqithi sokubala kunye nombala wezitulo zakho zebar.
Izizathu zokukhetha i-countertop ye-Waterfall kwi-Kitchen Island yakho
Iindleko zamanzi aphantsi kweSiqithi seKhitshi
Iindidi zezinto ezisetyenzisiweyo zokuBala kweMpophoma
Iingcamango ze-Countertop ze-Waterfall Island
Yongeza isibheno sobuhle . Alithandabuzeki elokuba esona sizathu siphambili sokuba kutheni iziqithi zekhitshi ezingamanzi ithandwa kakhulu kungenxa yobuhle ababongeza ekhitshini. Nangona obu buchule bokuyila bulula, budala ugqibe ngokubonakalayo kunye nokutsala ngamehlo okudala ingxelo eya kuhlala iminyaka.
Isebenza njengeqhekeza elinamandla okanye indawo ekugxilwe kuyo ekhitshini. Isiqithi sekhitshi yenye yezona zinto zibalulekileyo ekhitshini. Ke ngokwemvelo, yenye yezinto eziye ziqapheleke ngokulula xa umntu engena kwigumbi. Iziqithi ze-Waterfall zisebenza ngokuqinileyo kwiikhikhini, zigxininisa embindini wendawo, ngenxa yoko zitsala amehlo rhoqo kuyo.
Iankile uyilo olupheleleyo lwekhitshi. Isiqithi sekhitshi esineengxangxasi sinokusetyenziselwa ukumisa uyilo lwegumbi, ukubonelela ngento ebonakalayo ebonakalayo apho zonke ezinye izinto zokudibanisa zidityaniswa. Inokuba sisiqalo esihle sokwenza uyilo olufanelekileyo lwekhitshi ekhayeni lakho. Ibeka ithoni ekhitshini lakho lonke, ikuvumela ukuba uthelekise, udibanise okanye uphucule isimbo esikhoyo kunye nombala wombala. Nje ukuba uthathe isigqibo ngenkangeleko yakho yesiqithi sekhitshi engamanzi, ngoku unganquma ukuba ufuna izixhobo ezilinganayo, iikhabhathi ezingafaniyo, ukukhanya okukhanyayo okanye okumnyama, izibambo zekhabiniti ye-satin okanye i-antique egqityiweyo, njalo njalo njalo njalo.
Inika elona thuba lilungileyo lokwazisa ngento eyahlukileyo kuyilo. Umahluko yenye yezinto eziphambili kuyilo olulungeleleneyo. Isiqithi sekhitshi esinamanzi aphantsi sinika indlela yokwenza isincedisi esinamandla esigxininisa kukwahluka ekhitshini. Ukwahluka okubonakalayo kombala kunye nokugqitywa kwezinto kuya kukuvumela ukuba ubambe ingqalelo yakhe nabani na ongena ekhitshini lakho.
Unokukhetha indawo yokubaleka ekhitshini yasekhitshi eyahluke mpela kwikhabhathi emnyama yomthi. Okanye ujonge umdibaniso wombala weklasikhi onje ngombala omnyama nomhlophe wekhitshi ngokukhetha isitopu esilahla esimnyama esimnyama sokuhamba kunye nekhabhathi emhlophe ephezulu.
Yokwenza nasiphi na isitayile. Uyilo lwala maxesha luhlala luhambelana nemigca echaziweyo, iimilo ezilungelelanisiweyo, iifom zeengalo kunye neeengile ezomeleleyo. Ikhitshi elinamanzi alungele ikhitshi yanamhlanje kuba iziphelo zeziqithi zenza i-90 degree angle echazwe kakuhle ebonisa ukutshintsha okuthe tye kokugqitywa. Kwakhona umphezulu ofanayo wenza ukubonakala okuqhubekayo okucocekileyo nokucocekileyo. Iziqithi zasekhitshini ezingamanzi nazo zibonisa ulingano kwaye zenze uyilo olulungeleleneyo.
Nangona ixhaphake ngakumbi kwizimbo zekhitshi zale mihla, isiqithi sekhitshi esinengxangxasi sinokusetyenziselwa indawo ephefumlelweyo ngokwesiqhelo, ukuba kuyenziwa ngocwangciso olucokisekileyo. Yindlela elungileyo yokuhlaziya ukubonakala kweekhabhathi zeklasikhi okanye iikhabhathi ezihonjisiweyo. Ukwazisa ngesiqithi sekhitshi engxangxasi kunika umbono we-vibe yanamhlanje. Ukudibanisa i-aesthetics yelixesha yesiqithi sekhitshi yempophoma kunye nezinto zemveli kuya kuvelisa isibheno esingamanzi, esingaphelelwa lixesha. Nokuba zithini na izitayile zoyilo ezixubekileyo, umphumo wokugqibela uyakuhlala uyimbonakalo entle, ecocekileyo nebukhali.
Ikuvumela ukuba ubonise ilitye lakho elilodwa lendalo. Khumbula ukuba uziva xa ufuna ilitye kakhulu kangangokuba ungade ulibeke eludongeni lonke ekhitshini lakho. Ewe, isiqithi sekhitshi engamanzi yeyona nto ikufutshane onokuyifumana. Ukukhetha izinto eziza kusetyenziswa ekhitshini kunokuba yinto enzima. Njengoko unikwa ukhetho olungapheliyo, ukufumana ilitye elifanelekileyo kunokudideka. Ukuba uthathe ixesha elininzi kunye nomzamo wokukhangela izinto ezifanelekileyo zokubala, ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuzibonakalisa kangangoko kunokwenzeka. Kwaye ekubeni iziqithi zasekhitshini zezona zinto zibalulekileyo ekhitshini, inika ithuba elifanelekileyo lokubonisa ilitye elilodwa, elinqabileyo onelunda ngalo, njengesiqwenga sobugcisa.
Ngokwesiqhelo, imiphezulu yeetafile yasekhitshini inokujongwa kuphela xa umile kodwa ngetafile yempophoma yesiqithi esinengxangxasi, imathiriyeli yestafile iyandiswa isiya emacaleni, ivumela nabani na ukuba abenombono opheleleyo wegranite okanye yemabhile yakho naxa behleli okanye kude kude ikhitshi. Isiqithi sekhitshi esineengxangxasi sidala ugxininiso- ke inokusetyenziselwa ukuqaqambisa ipatheni emenyezelayo kwimabhile okanye ukubonisa imingcelele etyebileyo kwigranite eyipateni. Ikwasebenza ngokukodwa kwizicwangciso ezivulekileyo, apho isiqithi esingumanzi esinokubonwa kakuhle sivela kwezinye iindawo ezisendlwini.
IziBonelelo eziSebenzayo. Ngaphandle kobuhle obumangalisayo bokuba iziqithi zamanzi ekhitshi zinegalelo ekhitshini, zikwabonelela ngezibonelelo ezininzi kunye nemisebenzi. Njengaso nasiphi na isiqithi sekhitshi esiqhelekileyo, isiqithi esingumanzi esinika usetyenziso oluninzi. Ingasetyenziselwa njengendawo eyongezelelweyo yokutya okungaqhelekanga nosapho okanye ukonwabisa izihlobo, inokusetyenziswa njengesixhobo sokusebenza esongezelelweyo, inokudityaniswa nolwakhiwo olongezelelekileyo, ezinye izinto zombane okanye isinki kwaye inokuthi isebenze njengendawo ekhethekileyo imisebenzi enjengokuxhela, ukubhaka okanye ukwenza ibartending.
Phakathi kwezi, ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwesiqithi sekhitshi yempompo yindawo yokutya kwasekuseni okanye indawo yokutya engaqhelekanga. Kwindawo yanamhlanje, ikhitshi, ngakumbi isiqithi, yamkelwe njengeziko lentlalo ekhaya. Ngaphandle kokusebenzisa isiqithi sekhitshi engxangxasi yokutya, ibha ingasetyenziselwa njengendawo eyongezelelweyo yokuhlala iindwendwe. Abanye abantu bakusebenzisa oku ukuzimanya nosapho, nokuba babelana ngemisebenzi ekhitshini okanye kwimisebenzi yolonwabo nabantwana. Ungayisebenzisa ekusebenzeni, ekufundeni nakweminye imisebenzi yobuqu.
Indawo yokusebenza eqikelelweyo inokudityaniswa iye ngasemva kwisiqithi sendawo yokuphekela ukwenza ukugquma kwezinto zokufihla izixhobo okanye zokuhambisa isitulo ngaphantsi. Ukugcina i-clutter okanye enye ifenitshala ekhutshiwe ivumela ukugqitywa kwendalo ukuba kuvele, ngaloo ndlela kudala ukucoceka kunye nokujonga ngakumbi ikhitshi lakho.
I-Overhangs kunye nokuphelisa imiphetho yee-countertops nazo zinokuthamba ngakumbi njengoko abantu behlala bengena kuzo. Kodwa ngempophoma edging kwisiqithi sakho sasekhitshini, iiphaneli ezisecaleni kunokwenzeka ukuba zihlala zikhululekile. Ngokukodwa ukuba isiqithi sakho sekhitshi yempophoma senziwe ngezinto zekomityi ezihlala ixesha elide ezinje ngegranite okanye i-quartz ekrwada ngokwendalo. Kwakhona, oku kulula kakhulu ukucoceka xa kuthelekiswa nepaneli esecaleni eyenziwe ngomthi kwiziqithi zakho zasekhitshini. Isiqithi sekhitshi esingamanzi siphinde sincedise ekukhuseleni iikhabhathi zakho.
Ukongeza kuloo nto, ikhawuntara yesiqithi seengxangxasi ilungele abantwana xa kuthelekiswa ne-overhangs kunye nezinye iintlobo zemiphetho. Akukho sidingo sokukhathazeka ngabantwana ababetha imiphetho ebukhali kwiikhawuntari kwaye, akukho bungozi bokubetha esinqeni sakho kwikhawuntara.
Indawo entle emnyama yokulinganisa imarble yeCalcatta yale khitshi yekhawuntari yesiqithi sempophoma sisiqithi sokwenyani samehlo. Ngomdaka omnyama ongwevu omnyama kunye nokuthambeka okwomeleleyo, kusebenza njengeyona ndawo kugxilwe kuyo ngokulula kwesi sithuba. Imephu emhlophe eyenziwe ngemithi yongeza ukufudumala okungafaniyo nokuqaqamba, ukuziva okupholileyo kokugqitywa okumhlophe kweendonga kunye neekhabhathi ezigungqayo. Ukongezwa kwezitulo zebar zomthi ezimnyama kunika indalo kwindawo, okwenza indawo yokutyela ibonakale yamkelekile kwaye imema.
Imiphezulu yeetafile yempophoma ixabisa ngaphezu kweekhawuntari eziqhelekileyo kuba zisebenzisa izinto ezongezelelekileyo kwaye zifuna iintlawuliso ezongezelelweyo. Ilitye lendalo elinjengemabhile, igranite kunye ne-quartz zinokuhla ukusuka kwi-75 ukuya kwi-120 yeedola ngokuxhomekeke kwinto leyo. Ngeendawo zokubala ezingamanzi ekhitshi, kuya kufuneka uthathele ingqalelo indawo eyongezelelweyo ekufuneka igqunyiwe ngezinto zakho ozifunayo. Ke endaweni yokuthenga izinto ngaphezulu kwekhawuntari, kuya kufuneka uthenge ngakumbi kwiiphaneli ezisecaleni.
Eyona spanx ilokhwe yomtshato
Iindleko zomsebenzi eziqhelekileyo zokufakwa kwetheyibhile zinokuba ngama-60- $ 100 ngeenyawo zenyawo nganye. Nangona kunjalo, ukubalwa kweekhitshi zesiqithi sekhitshi, iindleko zabasebenzi zibiza ngaphezulu. Ukuze iindawo zamatye zifumane ukujonga okuqhubekayo, imiphetho yezinto kufuneka isikwe ngokuchanekileyo kusetyenziswa umsiki wolawulo lwe-laser. Le nkqubo iyodwa inokongeza i-1000 ukuya kwi-2000 yeedola kwiindleko zeprojekthi.
Ngokubanzi, imithombo yamanzi yasekhitshini yesiqithi sekhitshi ibiza ngaphezulu kodwa ingqina ukuba lolona tyalo mali kuba ezi zinto zinokuchaphazela ngakumbi ixabiso lokuthengiswa kwekhaya lakho.
Ezinye iingcebiso ekuyileni i-Waterfall Ikhitshi Island:
Khetha izinto ezikumgangatho ophezulu kunye nomthengisi onedumela. Izinto ozifunayo ukwenza ikhawuntara yesiqithi seengxangxasi kufuneka ibe sisilayidi esipheleleyo esinamaphiko asetyenziswa kuphela kwimiphetho. Ukucutshungulwa okuphunyezwayo kwikhawuntara ye-waterfall kuyinkimbinkimbi ngakumbi xa kuthelekiswa nenkunzi yenkomo ehleliweyo. Qinisekisa ukuba oku kwenziwa yingcali enezakhono ukuqinisekisa ukuba izinto zakho ziphathwa ngononophelo kwaye zifakwe ngomgangatho ophezulu kuphela womsebenzi.
Ukuthintela iikhawuntari zakho zasekhitshini ekukhuphisaneni nesiphambuka sekhitshi yesiqithi seekhitshi, khetha uhlobo lweedging olulula nolungengowokuhombisa kakhulu, njengomphetho we-bevelled, umda owenziwe lula okanye inkunzi yenkomo.
Ukuba ufuna ukubeka ugxininiso kwimigca kunye nobukhulu be-counter yakho yempompo yamanzi, unokuhlaziya ukuya kumda odibeneyo. Umda odibeneyo okanye umgca odibeneyo ongenamanzi u-6 centimeter okanye u-2.5 intshi yecala elisebenzisa ulwahlulo lwesibini lwelitye. Oku kwenza ukuba izinto zakho zokubala, ezinjengegranite okanye imarble, zibonakale zijiyile. Le ikwayindlela entle yokunciphisa iindleko ngaphandle kokujongela phantsi ukubonakala kwesiqithi sakho sekhitshi engamanzi.
Ukwenza phantse iindawo ezingabonakaliyo zekhawuntingi yakho yasekhitshini yesiqithi sempophoma, qiniseka ukuba imiphetho iyanqunyulwa kwi-angle ye-45 degree. Imiphetho encitshisiweyo iqinisekisa ukuba imiphezulu yeetafile kunye neepaneli zecala zilungelelene kakuhle kwaye azinzile. Qiniseka ukuba imiphetho ipolishiwe. Ngenye indlela, unokuba nayo phezulu okanye ikhawuntari ethe tye egcinwe ngaphezulu kweepaneli zecala okanye ikhawuntari ethe nkqo.
Phantse nayiphi na into esetyenzisiweyo njengendawo yokuphamba inokuthi iguqulwe ibe yindawo yokubaleka engxangxasi. Ukhetho lwakho lwezixhobo luya kuxhomekeka kakhulu kwinkangeleko kunye nesitayile ofuna ukusiphumeza ekhitshini lakho. Apha ngezantsi siphonononga ezinye zeentlobo zezinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa izixhobo zokubala ezingamanzi, kunye nesishwankathelo seempawu zabo ezilungileyo nezingalunganga.
Granite - I-Granite yinto ethandwa kakhulu kwi-countertop. Lilitye lendalo elicholwe emhlabeni kwaye lenziwe nge quartz, feldspar kunye neMica. I-Granite idla ngokumbiwa kwiibhloko ezinkulu ize yahlulwe ibe ngamacwecwe kwaye ipolishiwe ukubonisa ubuhle bayo obukhethekileyo, obuhlukile. Ukwakheka okungafaniyo kwegranite kuyinika ubunzima bayo kunye nesibheno esibonakalayo esingumlinganiso esinamachaphaza, ukubetha, imithambo kunye nokuhamba. I-slab nganye inembonakalo eyahlukileyo kwaye iza noluhlu olubanzi lwemibala, isenza ukuba kube nokwenzeka koyilo olungapheliyo.
Uyathandwa kakuhle kungekuphela ngenxa yobuhle bayo obukhangayo, igranite yaziwa ngokuba yenye yezona zinto zigqibeleleyo zamatye endalo. Bubushushu kunye nokukrwela okunganyangekiyo kwaye bunokumelana nokuwohloka kunye nokuqhekeka kokusetyenziswa kwemihla ngemihla kwemihla ngemihla. Nangona kunjalo, inyengane inovakalelo kwiiasidi kwaye inokubangela ukungaboni ngasonye xa sele kuvezwe kuyo. Ngobukho bokubuyela umva okunjalo, ukutywinwa kwamaxesha ngamaxesha kuyafuneka ukuqinisekisa ukuba akukho mabala kunye nolwelo olungena kumphezulu wamatye.
Kuba igranite ingena kwiizilebhu, ubukhulu bayo obukhulu buvumela ukuba busetyenziswe ngokukhululekileyo kwiifom ezahlukeneyo kunye nobukhulu, ukuyenza ibe yinto efanelekileyo kakhulu ekubaleni izixhobo zokubala zekhitshi. Ngama-slabs amakhulu, kukho ngaphantsi kweeplanga. Kwakhona, ubuhle begranite eyahlukileyo benza ukuba kufanelekile ukuba uboniswe kwinqanaba elikhulu. Unokukhetha kwi-veining eyoyikisayo, uqhankqalazo olungaqhelekanga okanye iipateni ezizodwa ezinamabala. Xa isetyenziswa kwisiqithi sekhitshi esineengxangxasi, inika ukukhanya kunye nokuqaqamba okungaphakathi kwikhitshi lakho.
Imiphetho yamanzi engxangxasi inceda imiphezulu yeetafile zegranite ukuxhathisa ukukhutshwa. Njengoko uninzi lweekona lunotyekelo lokuqhekeka, ukuphelisa le miphetho ivulekileyo kuya kuqinisekisa ukuba i-countertop yakho ayonakalisi xa ugileka kuyo.
Eminye imizekelo yegranite ekhangeleka intle kwiziqithi zasekhitshini elinengxangxasi yi-antico cream granite, uba tuba granite, alpine white granite, black marinace granite, Bordeaux cream granite and black galaxy granite.
Iindleko: Iitafile zegranite zi- $ 20 ukuya kwi-75 yeenyawo zenyawo nganye, kuxhomekeke kuhlobo, iphethini kunye nombala wezinto.
Marble - Imarble lilitye lendalo elenziwa kwilitye lekalika elishushu kwaye lifakwe kuxinzelelo lwe-metamorphism. Ngokuyintloko yenziwe nge-mineral calcite, imarble ikwenziwe nezinye izimbiwa ezinje ngodongwe, i-mica, i-pyrite, i-quartz kunye ne-graphite. Xa uphantsi kwemetamorphism, i-calcite kwiifom zelimestone kubunzima besakhiwo se-crystalline.
I-Marble isetyenziswe njengezinto zokubala ngenxa yokuqina kwayo okubenza bakwazi ukuhlala iminyaka. Ikwanobushushu obupholileyo ngokwendalo, ogcina iindawo zokusebenza zilawulwa ngobushushu.
Ngaphandle kwezi, imarble yaziwa nangobuhle bayo beklasikhi kunye nobuhle bendalo. Njengegranite, ikwanobuhle bendalo obufanele ukuboniswa. Ukuba ufuna ukwenza ingxelo enesibindi ekhitshini lakho, intle marble impophoma yekhitshi kwisiqithi yenye yezona zinto zibalaseleyo zoyilo onokuzihlola. I-Marble idla ngokuba neepatheni zokugcoba ezihamba kakuhle phezu kwelitye. Oku kubenza babe lukhetho lwendalo kuyilo lwengxangxasi kuba iphethini ye-veining inokubaleka ngaphezulu, iqhubeke kwimiphetho kwaye iqhubeke yonke indlela iye ezantsi. Idala umphumo omangalisayo kunye nokungafani okucacileyo kwiindawo ezicacileyo, ukuqaqambisa uyilo olulodwa kunye nepateni yelitye lakho.
Eminye imizekelo yemarble ebonakala imangalisa ngakumbi njengemiphezulu yeetafile yeziqithi zasekhitshini engxangxasi yile: mhlophe imarble yemarble, imarble yecalacatta kunye nemarble ye-statuario.
Iindleko: I-countertops ye-marble i-25 ukuya kwi-75 yeedola ngeenyawo zenyawo.
Quartz -I-Quartz iza kwiindidi ezimbini: olunye luhlobo lwamatye endalo aqatywe emhlabeni, ngohlobo lwee-slabs ngelixa elinye liyinto eyenziwe ngumntu okanye uhlobo lwelitye eliyinjineli.
Ilitye elenziwe ngobugcisa beQuartz ikakhulu lenziwe ngaphezulu kwe-90% yezinto zendalo- i-93% yomgubo we-quartz otyunyuziweyo kunye ne-7% ye-resin epoxy, ukuba zichane ngqo. Ukongezwa kwe-resin esekwe kwi-epoxy ibambe amasuntswana atyunyuziweyo kunye, ngelixa isomeleza amandla. Umntu wenza ii-pigment emva koko zongezwa kulo mxube ukunika umbala kwilitye eliyinjineli. I-Quartz iza noyilo olwahlukileyo kunye nemibala enepateni efanayo ye-veining kunye namachaphaza kwimarble kunye negranite.
I-Quartz ifana nokubonakala kwelitye lendalo kodwa ifuna ulondolozo oluncinci. Njengegranite, le nto ihlala ixesha elide kakhulu kwaye iyamelana nobushushu, imikrwelo kunye namabala inokumelana neempawu zemela kunye neepads ezirhabaxa kwaye kungqinwe ukuba zihlala iminyaka. Ngokungafaniyo nelitye lendalo, i-quartz doe akufuneki itywinelwe ukukhuselwa. Nangona kunjalo, i-quartz iyabuthathaka kwimitha ye-UV, ikhokelela kutshintsho kumbala xa ivele rhoqo kubushushu belanga.
Xa kuthelekiswa nezinto zelitye zendalo, umbala welitye elinobunjineli uyalingana kuyo yonke loo nto, isenza ukuba sibe sisixhobo esifanelekileyo sokusebenzisa isiqithi esingenamthungo sekhitshi. Ngokungafaniyo, igranite edla ngokufuna ukuthengwa ivela kwibhetshi enye ukuqinisekisa ukuthelekiswa kwencwadi, itafile yelitye yobunjineli kunokwenzeka ukuba ivelise utshintsho olunombala. Ke ukuba ujonge ngokukodwa xa kufikwa kukungafezeki kwendalo kunye neziphene ezinokufumaneka kwiitafile zamatye zendalo, iQuartz yinto efanelekileyo yesiqithi sakho sekhitshi.
I-Quartz ikwimo eguqukayo ngakumbi kwaye kulula ukuyiphatha, xa kuthelekiswa nezinye izinto, ezenza ukuba zenziwe ngokwezifiso kakhulu kwikhawuntara yomjelo wamanzi.Eminye imizekelo ye-quartz ekhangeleka intle njengee-countertops zeziqithi zekhitshi ezingamanzi I-calcatta quartz yeklasikhi, i-perla quartz emhlophe kunye ne-taj mahal quartzite.
Iindleko: Ixabiso le-quartz liyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lwezixhobo. Ngokubanzi, ibiza kakhulu kunegranite, ixabisa i-avareji ye- $ 70 ukuya kwi-95 yeenyawo ngonyawo wesikwere. Ikhawuntari esisiseko ye-quartz ixabisa i-60 yeedola ngonyawo wesikwere, ngelixa i-quartz ephezulu ibiza ukuya kuthi ga kwiidola ezili-100 ngonyawo wesikwere.
Umphezulu oqinileyo - Ikwabizwa ngokuba yiCorian, umphezulu oqinileyo luhlobo lwento eyenziweyo eyakhiwe ukuba ibukeke njengelitye lendalo, kodwa ineempawu ezintle zolunye uhlobo lwangoku. Ngokungafaniyo nelitye, imiphezulu eqinileyo ayihlali. Injongo yoqobo yokuvelisa kunye nokuyila le mveliso kukwenza umphezulu ohambelana ngokufanayo kwaye uphelele- ukusuka phezulu, embindini nasezantsi.
Imigangatho eqinileyo ine-porosity ephantsi kakhulu, yiyo loo nto ingadibani neentsholongwane, ukungunda kunye nokungunda. Ikwahlala ixesha elide kakhulu kuba imathiriyeli iqinile kuyo yonke. Nangona kungenakunyameka ukumelana, imiphezulu yeetafile yomgangatho oqinileyo inokulungiswa ngokulula ngokuhlala kwakhona.
Indawo eziqinileyo zinokwenziwa kwiziqithi zasekhitshini elinengxangxasi, nangona kunjalo kufuneka zenziwe ngumfaki wobuchwephesha esebenzisa izixhobo ezizodwa. Umphezulu oqinileyo ulungele iziqithi zasekhitshini elinengxangxasi kuba zenza indawo ebonakalayo enokusetyenziswa njengendawo yokusebenza kunye nokukhuselwa okuzinzileyo kwekhabhathi. Inokugqitywa ngomphetho ongenamthungo ophantse ungabonakali ngokudibeneyo imigca, ukwenza ukujonga okucocekileyo. Kwaye ikwajongeka njengelitye lendalo, indawo eqinileyo yempophoma yesiqithi ekhitshini iya kuba nomtsalane wobuhle. Olu hlobo lwezixhobo lulungele iikhitshi zale mihla nezangoku.
Olunye uphawu oludumileyo lweendawo eziqinileyo ezinokusetyenziselwa ikhitshi lakho kwisiqithi seFormica, iStaron, iGibraltar, iAvonite neMystera.
Iindleko: Indawo yokubala eqinileyo yokubala ibuyisela i-52 yeedola ukuya kwi-120 yeenyawo ngenyawo lesikwere, kuxhomekeke kuhlobo okanye umenzi wezixhobo, isimbo, umbala kunye nepateni.
Imiphezulu yeetafile elaminethiweyo - Eyaziwa njengeFomica, ii-laminates zenziwe ngamanqanaba aliqela ezinto ezahlukeneyo ezityiweyo kunye. Uluhlu oluphezulu lwenziwe nge-melamine resin ekhusela zonke ezinye iindawo. Uluhlu lokuhombisa luqulathe uyilo kunye nombala. Umaleko wokugquma okanye wokunxiba wenziwe iphepha elifana neefilitha zekofu, ezidityaniswe ne-aluminium oxide kunye ne-melamine resin. Isiseko somphezulu we-laminate senziwe ngephepha le-Kraft eliqiniswe zii-resins.
IiLaminates kulula ukuzifaka kwaye zinokumelana namabala kunye nobushushu, nangona kunjalo, ezinye iitafile zekhitshi elaminethiweyo zinochuku ekuvezeni kakhulu amanzi.Iilaminates nazo ziza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo kunye nemibala, ukusukela kwithafa, eziqinileyo ukuya kwipateni eyahlukileyo elinganisa ukubonakala komthi kunye nelitye. Iza ngeenyawo ezi-4 nge-8 yeemakhishithi ezinokusetyenziselwa ukugubungela indawo enkulu efana nekhabhathi okanye ikhawuntara yesiqithi. Iilaminates zinokunqunyulwa ngokulula kwaye ziguqulwe zibe ziimilo. Eyona uyilo iqhelekileyo, eyipateni yomthi, ijongeka ngathi ibetha kwiziqithi zasekhitshini elinengxangxasi, yenza ubushushu kunye nokongeza umahluko kwizithuba. Iziqithi zasekhitshini ezingamanzi ezingamanzi nazo zilungele iimeko zangoku zasekhitshini eziphefumlelweyo zangoku.
Iindleko: Ii-laminates zihlala zingabizi, kunye neendleko zayo ukusuka kwi-5 ukuya kwi-25 yeedola ngeenyawo zenyawo ngokuxhomekeke kuyilo.
Ikhonkrithi - Ikhonkrithi yenziwe ngomxube wesamente, igrabile, isanti kunye namanzi. I-porous kodwa yakuba itywinwe, iba ibala kwaye iyamelana namanzi. Kananjalo ayonakalisi kwiimbiza ezishushu kunye neepani.
Ukulunga kunye nokubi ngokuhlala kunye
Ikhonkrithi yinto efanelekileyo kwiziqithi zasekhitshini elinengxangxasi kuba inokuveliswa ngexesha elide ngaphandle kwesidibanisi kunye nokuthunga Iyaguquguquka kwaye inokwenziwa ngokwezifiso ngokobume, ubungakanani, umbala kunye nokugqiba. Oku kufanelekile kwiikhitshi zale mihla nezangoku, ngakumbi useto lweshishini oluphefumlelweyo.
Iindleko: I-countertops yekhonkrithi eyi-1.5 intshi eyi- $ 65 ukuya kwii-135 zama-dollar ngeenyawo zenyawo.
Umthi oqinileyo - Ayikho enye into enokuthi ifane nobuhle bendalo obuhlukileyo kunye nobushushu beplanga yesiqithi sekhitshi esomeleleyo. Ngaphandle kwe-aesthetics eyongeziweyo, iinkuni eziqinileyo nazo zihlala zomelele kwaye zomelele. Nangona kunjalo, kufuneka inyangwe kwaye itywinwe ngaphambi kokuyisebenzisa ukuyikhusela kubumba, ukungunda kunye nezinambuzane.
Ngokukodwa isetyenziswe njengebhlokhi yeebhusha, iinkuni eziqinileyo ezingamanzi eziqithi zasekhitshini zinokusetyenziselwa ukusika ngqo. Esi sixhobo sisebenza ngokugqibeleleyo kwisiqithi sekhitshi esineengxangxasi kuba sinegalelo kwindalo yendalo eyenza ukuba ikhitshi lizive liphumle ngakumbi kwaye limeme. Kwakhona, ukugcina ukhuni olujongeka njengokuluhlaza kwaye ulishiya lingagqitywanga ukugcwalisa ilizwe, i-rustic kunye nendlu yasefama ekhitshini ephefumlelweyo.
Ezona ntlobo zixhaphakileyo zomthi ezisetyenziselwa iziqithi zamanzi ekhitshi yempophoma yicherry, imephu, i-wenge, i-walnut, i-bamboo kunye ne teak. Iinkuni ezibuyisiweyo okanye iiplanga eziluhlaza ezenziwe ngamaplanga zinokusetyenziswa njengezinye iindlela ezingabizi kakhulu.
Iindleko: Iikhawuntari zekhitshi eziqinileyo zomthi zijikeleze i- $ 30- $ 60 ngeenyawo zenyawo, nge-avareji yeedola ezingama-40 ngenyawo lesikwere, kuxhomekeke kuhlobo lomthi. Imephu ixabisa i-45 ukuya kwi-75 yeedola ngeenyawo, ngelixa i-walnut ixabisa i-100 yeedola ngonyawo wesikwere. I-teak zezona ntlobo zibiza kakhulu, zifikelela kwi- $ 130 ngeenyawo zenyawo nganye. Iibhloko zebhusha zihlala zi- $ 40- $ 65 ngeenyawo zenyawo nganye.
Apha ngezantsi siphonononga imizekelo yeziqithi zasekhitshini ezinendawo entle yokuphambuka kwesiqithi seengxangxasi ukukunceda ufumane ukukhuthazeka ekuyileni ikhaya lakho.
Lo mfanekiso ungasentla unekhitshi entle yanamhlanje enesiqithi esinengxangxasi kunye nendawo yokutyela. Umphezulu omangalisayo we-granite counter counter yesi siqithi ume ngokuchasene neendonga ezimhlophe ezimhlophe kunye nekhabhathi emhlophe emenyezelayo, esebenza njengomtsalane ophambili kule khitshi. Siyabona kwakhona ukuba indlela ephantsi efudumeleyo kwipatheni yokuthambisa yegranite ngokungqinelana nomgangatho womgangatho wethayile yodongwe kunye nokhuni phantsi kweekhabhathi. Izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nezixhobo ze-satin ezi-brashi zibonelela ngokuchaseneyo okufihlakeleyo, ngelixa i-mosaic tile splash board kunye nezitulo zokudlela ezibomvu eziphefumlelweyo zanamhlanje zinegalelo kumbala ngaphandle kokugqitha ukujongwa kwendawo.
Le khitshi yanamhlanje enqabileyo ineglasi ephezulu kumgangatho wekhabhathi, eyenza indawo ibonakale inkulu kwaye ikhanya ngakumbi. Kwiziko kukho ikhawuntara yesiqithi esipheleleyo seengxangxasi esisebenza njengendawo yokuhlala yolonwabo kunye nokutya. Iimpuphu zokubala ezimhlophe zemarble ezinemigca emikhulu engwevu zinegalelo kumdlalo weqonga ngelixa ibhodi yokutshiza ehambelanayo yenza uyilo lwendawo luhlangane ngakumbi. U-Satin ugqibe izixhobo zensimbi ezingenasici ezifana noluhlu lwefood, ifriji yewayini kunye nee-oveni zikwangqinelana negreyini yentsika yesiqithi sempophoma, inika isandi esibukhali kweli khitshi. Ukufumana ezinye izimvo ezibandakanya iziqithi zasekhitshini ezinkulu ezinezihlalo jonga igalari yethu ..
Ukwenza ukubukeka okuphefumlelweyo okungaphezulu, sebenzisa iiplanga eziluhlaza njengeplanga ephezulu yekhitshi lakho. Ukulawula eli lizwe likhwankqisayo eliphefumlelweyo indlu yasekhitshini yindawo ekhethekileyo yamaplanga enesiqithi esinokubonakala okungagqitywanga. Iikhabhathi ezimhlophe ezi-inset ezimhlophe ezineemphatho ezimnyama ze-antique zinika umahluko omkhulu kwiincopho zokubala ezimnyama eziqinileyo ezimnyama, imigangatho egreyithiweyo yokhuni kunye nomnyango ogqityiweyo omnyama. Ukwenza ngokufanelekileyo yonke intshi yendawo yekhitshi ekhoyo, iishelufu ezivulekileyo ezenziwe ngomthi zibekwe ngaphezulu kwendawo yokulungiselela, zivumela abaninimzi ukuba babonise uluhlu olubanzi lwezinto ezinekhitshi ezinemibala kunye nezinto zeglasi. Ukuxhonywa kuphahla oluvulekileyo kwaye usete ngaphezulu kwecandelo lesiqithi sekhitshi yezinto zakudala eziphefumlelweyo zokukhanya kwezibane ezimanyanisa umbala ocacileyo wendawo.
Imbonakalo esisityebi, efudumeleyo yale khitshi yanamhlanje ephucukileyo ifezekiswa ngokusetyenziswa kwemigangatho ephezulu eyenziwe ngomthi, ngombala ophakathi, ngomthi. Kumgangatho ophezu kwelinen elaminethiweyo iikhabhathi zomthi zigubungela isibhakabhaka senye yeendonga, zibonelela ngendawo yokugcina ephezulu ejikeleze ifriji enkulu emi-2. Iglasi efrijiweyo yonyusa iikhabhathi kunye neetafile eziphezulu ezibengezelayo zeetshokholethi zibekwe ngaphezulu kwendawo yokulungiselela, zenza inani elifanelekileyo lokuthelekiswa neebhodi ezimhlophe zethayile yangaphantsi. Kubekwe embindini indawo ekuhamba kuyo amanzi esiqithi esisebenza njengendawo yokutyela yabantu abane. Ukunciphisa ubunzima besithuba, kusetyenziswa itafile emhlophe ecwecwe yokugcwala emhlophe, esenza ibhalansi egqibeleleyo yokuqina kunye nokuthamba.
Ukongezwa kwesiqithi sekhitshi esisisiseko sisisombululo esifanelekileyo sokufumana indawo efanelekileyo kulwakhiwo lwekhitshi olubiyelweyo njengoko lunokusebenzela imisebenzi emininzi ngokubhekisele kugcino olongezelelekileyo, indawo yokusebenza kunye nendawo yokulungiselela. Okufakwe kule khitshi yanamhlanje ebabazekayo sisiqithi esineengxangxasi ezimhlophe kunye ne-top marble counter ephezulu egxininiswe yimithambo emikhulu engwevu. Idityaniswe nekhabhathi emhlophe egungxulayo emhlophe enezixhobo zesinyithi zechrome kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici ezingenanto, uyilo lwale khitshi lukhupha ubuhle kunye nobunkunkqele. Imigangatho yewalnut efudumeleyo efudumeleyo ivumela ikhabhathi kunye nesiqithi ukuba sibonakale, ngelixa ukusetyenziswa kwamanqwanqwa amatye amnyama egranite kunye neebhodi zendalo zemithi yeefascia kuludwe lwekhitshi elinegalelo kwigama lokufudumeza elinika ubunzulu kwindawo.
Eli khitshi lanamhlanje liyakhazimla njengekhabhathi emhlophe egudileyo ngaphezulu kweekhabhathi ezijikeleza udonga, zisenza ukuba indawo ibonakale ikhanya kwaye ibukeka icocekile. Ukutshatisa isitulo esimhlophe esimhlophe esimhlophe esinemilenze yentsimbi ye-chrome kunika isibheno esenziwe ngesitayile, ngelixa i-satin igqityiwe izixhobo zombane zincedisa indawo ezigudileyo ezisetyenziswa kweli khitshi. I-monotony yeekhabhathi ezinemibala ekhanyayo yaphulwe ngokusebenzisa ibhodi ethe tyaba kakhulu, yenza uphawu olufihlakeleyo olungaphambuki kwisikimu sombala esingathathi hlangothi. Isiqithi esineengxangxasi zekhitshi sisebenzisa umahluko omkhulu phakathi kweencopho zomkhenkce ezimhlophe zomkhenkce kunye neepaneli zangaphambili zomthi ezixineneyo. Ukugqithisa kukwasetyenziswa ukuze izitulo zebhari zikwazi ukungena ngokulula phantsi kwesi siqithi.
Ukulinganisa ukujonga okunzima komgangatho omnyama ukuya kwiikhabhathi zekhitshi eziselingi kunye nokusetyenziswa kwesiqithi esinombala okhanyayo. Eli khitshi langoku lisebenzisa ikhonkrithi njengendawo yokuphambanisa kwisiqithi seengxangxasi esiphakathi, sivelisa indawo egudileyo, egudileyo ehambelana nokugqitywa kokuboniswa kweebhodi zebarble marble. Iimodyuli ezimnyama ezilaminethiweyo zibaleka ezindongeni zombini zekhitshi, zibonelela ngendawo eyaneleyo yokugcina izinto zasekhitshini. Ubungakanani obongeziweyo kuyilo bufezekiswa ngokusetyenziswa komgangatho okhanyayo weplanga okhanyayo oqhayisa ngamaqhina endalo kunye neenkozo. Izihlalo zala maxesha ezenziwe ngesikhumba ezenziwe ngombala we-taupe zongezwa ekusebenziseni ikhawuntara yesiqithi sengxangxasi njengendawo yokutyela, ngelixa uboleka umbala odityanisiweyo kwiphalethi yemonochromatic yendawo.
Yenza inqaku elibonakalayo lomdla obonakalayo kwindawo yakho yasekhitshini ngokwandisa iincopho zemarble ezikumgangatho ophezulu kumda wesiqithi sakho sasekhitshini. Oku kukuvumela ukuba ubonise ngezinga elikhulu ubuhle bamatye anqabileyo kunye nawangaphandle, njengaleyo iboniswe kulo mfanekiso. Ukuba ujonga ngokusondeleyo, ukudibanisa phakathi kweepaneli eziphezulu kunye necala kuyancitshiswa, kuqinisekiswe ukungabinamthungo phantse, ngelixa ukupheliswa kwemiphetho yangaphambili kudityaniswa. Imigca ephantsi emarmore emhlophe iyancedisana nezixhobo zokubamba ze-chrome kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici. Indibaniselwano yeekhabhathi zangaphakathi zomthi ezifakwe ngaphakathi ezimnyama kunye neethayile ezimhlophe zendlela ezihamba ngaphantsi komhlaba zenza umahluko kumgangatho we-tile yodongwe omnyama. Izitulo zebar ezikhuselekileyo ezonyuselweyo ziyongezwa, ngokukhawuleza ukuguqula isiqithi seziqithi zamanzi ukuya kwindawo yokutyela ekhitshini.
Ewe ayikho enye into enokulingana nobuhle beplanga kunye nokugqitywa kwamatye endalo. Eli khitshi langoku lidibanisa zombini izinto zeklasikhi kunye nezala maxesha kwimbonakalo enye entle kusetyenziswa izinto zendalo ezintle. Iindonga ezigxininisayo, kunye neencopho zokubala kunye nesiqithi seengxangxasi zonke zisebenzisa i-marble emhlophe etyebileyo enemithambo yegrey engummangaliso. Ukudibanisa oku kugqityiweyo kuvelisa ukubonakala okuhambelanayo kunye nokuhlangana ngelixa kubonisa ubuhle obukhethekileyo belitye. I-cherry ebomvu ngaphezulu nangaphantsi kweekhabhathi zekhawuntari ezinoyilo oluhlengahlengisiweyo kunye neziphatho zentsimbi ezibrashiweyo zivelisa imvakalelo eshushu. Iiphaneli zangaphambili zesiqithi seengxangxasi nazo zisebenzisa umthi ofanayo obomvu we-cherry, ukwenza umphumo ofanayo. Oku ibhari yesidlo sakusasa yesiqithi sasekhitshini ineempahla zemithi zentsimbi kunye nezitulo zentsimbi.
Ukungqina ukuba kuncinci kuhlala kuninzi xa kufikwa kuyilo lwala maxesha, esi siqithi sempophoma sempophoma sibonisa ubuhle kunye nobuhle ngaphandle kokulula kwayo. Esi siqithi seengxangxasi siyinto efanelekileyo yokumisa ikhitshi ephefumlelweyo yanamhlanje. Izixhobo zensimbi ezingenasici zincedisa indawo egudileyo, egudileyo ngelixa izixhobo ezimnyama zazisa umbala oqaqambileyo kodwa ongaxakekisiyo. Kulo mfanekiso, sinokubona ukuba esi siqithi sekhitshi esingxangxasi simi njani kwindawo yokutyela efudumeleyo kunye neendawo zokuhlala.
Esi siqithi sineengxangxasi ezinamanzi aqaqambileyo anombala omhlophe namalahle. Ngokusebenzisa i-overhang enkulu kunye nekhabhathi emhlophe emhlophe ehambelana neendonga zangasemva, isiqithi esingamanzi sinika umbono wendawo yokubala ene-cantilevered, enkulu ngokwaneleyo ukuba ibonelele kwimisebenzi eyahlukeneyo yokulungiselela ukutya ekhitshini. Iikhabhathi ezimhlophe ezibengezelayo zimiselwe kudonga olunye olupheleleyo, zinika indawo yokugcina ephezulu. Ngasekhohlo, ungabona udonga olusisigxina olwenziwe ngelitye lendalo elinombala wentlabathi, elinika ubomi kwisithuba. Ukuhonjiswa okuncinci kusetyenzisiwe, kunye nezibane zala maxesha kuphela kunye nezixhobo zentsimbi ezingenazingcingo ezisebenza njengezincedisi. Ukusetyenziswa kwethayile yegreyikhi engwevu yenza ukuba yonke iphalethi engathathi hlangothi ibambane.
Into yokuqala oyibonayo kule khitshi enesitayile yindonga egudileyo yethayile egudileyo. Ukuvumela eli nqaku ukuba lime ngokugqibeleleyo kwisithuba, zonke ezinye izinto zoyilo zagcinwa zicacile, zilula kwaye zingathathi cala. Nokuba isiqithi esingumanzi sinezihombiso ezincinci, kodwa endaweni yoko sasinombala owomeleleyo weqokobhe elimnyama onika ingxelo ngokwemibala, kodwa engakhuphisani nendawo ekugxilwe kuyo yendawo. Iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe, isilingi emhlophe, imigangatho emhlophe emhlophe kunye nezitulo ezimhlophe zala bar zonke zenza ukuba eli khitshi libonakale liqaqambile kwaye libanzi. Ngelixa ukusetyenziswa kwezixhobo zentsimbi ezingenasinxibo kunye nezixhobo zekhabinethi kuhambelana nemeko yanamhlanje yendawo.
Amacwecwe okubalwa kweziqithi zasekhitshini elinengxangxasi ayiphelelanga kwizinto zemveli zodwa, kodwa umntu unokufumana ubuchule ekuphononongeni iinketho ezintsha zokuvelisa uyilo olubambe amehlo. Eli khitshi langoku linesiqithi esinengxangxasi esineetayile zeglasi. Ukubonakala kweethayile zeglasi kudala ukukhanya okukhanyayo njengoko izibane zikhanya ngaphezulu komphezulu wazo, zivelisa olugqibeleleyo, isitatimende esinesibindi sendawo. Ibhodi yokutshiza ikwasebenzisa iithayile ezifanayo ezinika isandi kudonga olupheleleyo lwekhabhathi. Ukudibanisa kunye nekhabhathi zekhitshi ezimnyama zewenge, umgangatho ophakathi wokhuni kunye neencopho ezimhlophe zokubala, kuyilwa imibala eyahlukileyo kunye noburhabaxa.
Iziqithi ze-Waterfall zisebenza kakuhle kwizicwangciso ezivulekileyo kuba abantu banokubona ngokupheleleyo ilitye elihle elibonakalisiweyo, nokuba ngaba bakwigumbi lokudlela okanye kwigumbi lokuhlala. Isiqithi esineengxangxasi sinokucacisa ngokufanelekileyo iindawo ngaphandle kokuphazamiseka. Leli khitshi lokunethezeka linodonga olupheleleyo ngaphezulu nangaphantsi kweekhabhathi zentsimbi ezakhiwe ngezinto zentsimbi. Umbala we-taupe othulisiweyo wekhabhinethi unika amandla okuzola kunye nengxelo kwisithuba. Imigangatho emarmore emhlophe inika isibheno esingapheliyo ngelixa ibhodi ebunjiweyo inika isandi esigqibeleleyo. Isiqithi esineengxangxasi sisebenzisa i-granite ye-beige entle kunye neglasi engaphezulu esebenza njenge-nook yesidlo sakusasa kathathu. Iwayini ebomvu ebomvu egcwele izitulo zebar zibonisa ukuthinta umbala ongagungqiyo kulungelelwaniso lwendawo.
Endaweni yokuhambelana noyilo lwesiqithi esiyi-waterfall, kutheni ungayiniki into yanamhlanje yokwenza ikhitshi libe nomtsalane ngakumbi. Embindini wale khitshi yanamhlanje enesitayile esityebileyo somthi webheki esenziwe phezu kwesiqithi sekhitshi. Esi siqithi sineengxangxasi ezinepaneli enye, asinikezi kuphela umdla omangalisayo, kodwa sinokuphinda sisebenzise ikhawuntari yokongezwa kwangaphambili okanye indawo yokutya eqhelekileyo. Umbala ofudumeleyo wesi siqithi seengxangxasi uzisa ubungqongqo bendalo kunye nombala kwisithuba esime ngokugqibeleleyo malunga nemvelaphi emhlophe emhlophe. Umgangatho weplanga weplanga ococekileyo ugcwalisa umbala wawo, usenza ukuba ikhitshi yamkelwe ngakumbi. Ngelixa iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezigcweleyo zinika umoya oqaqambileyo kunye nomoya kwisithuba.
Isiqithi esineempophoma yeyona ndlela ilungileyo yokuhlaziya ukubonakala kwekhitshi eliphefumlelweyo ngokwesiko. Le khitshi yakudala iyahlaziywa maxesha kunye nokusetyenziswa kwekhawuntala yeengxangxasi zeengxangxasi ezisebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kwindawo. Iipateni ezinkulu ezinamachaphaza egrey, i-taupe, indlovu kunye nomdaka, le granite ijongeka inesibindi xa iboniswa kwinqanaba elikhulu. Isiqithi esineengxangxasi sisebenzisa ikhabhathi emhlophe engakhuphisani nesibheno esomeleleyo selitye. Umgangatho omenyezelayo we-cherry uvumela isiqithi ukuba sidadele kwimvelaphi efudumeleyo, ngelixa iikhabhathi zekhitshi zekhitshi zibonelela ngemfudumalo kumbala wombala wale ndawo.
ngubani omele ukumenywa kwisidlo sangokuhlwa sokurhola
ndimthini umyeni wam ngosuku lokuzalwa kwakhe
iikowuti ezimnandi ezimfutshane ngaye